Air Canada na-amalite ụgbọ elu site na Montreal ruo Bogotá, Colombia kwa afọ
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Air Canada na-amalite ụgbọ elu site na Montreal ruo Bogotá, Colombia kwa afọ
Air Canada Taa kwuputara iwebata ọrụ ọhụụ kwa afọ n'etiti Montreal na Bogotá, Colombia na-amalite June 2, 2020. Fgbọ elu ga-arụ ọrụ ugboro atọ kwa izu na ụgbọelu Air Canada Rouge Boeing 767-300ER ụgbọ elu na-enye nhọrọ nke ego na ọrụ akụ na ụba.
“Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịnye naanị ụgbọ elu na-adịghị akwụsị akwụsị, kwa afọ na-ejikọ Montreal na Bogotá, obodo abụọ na-ewu ewu nke jupụtara na akụkọ ntolite na ọdịbendị. Routezọ ọhụụ a mejupụtara ọrụ Toronto-Bogotá anyị dị ugbu a, yana ọnọdụ Air Canada dị ka ọkpụkpọ dị egwu na-ejikọ ahịa na-eto eto n'etiti Montreal na isi obodo Colombia na obodo kachasị ukwuu. Mgbakwunye nke Bogotá na-anọchi anya ụzọ ọhụụ 39th nke Air Canada malitere site na Montreal-Trudeau Airport kemgbe 2012, na-egosi nke ọma ntinye anyị iji mepe Montreal dị ka isi ihe dị mkpa. Bogotá nọkwa n'ụzọ dị mma iji nye ohere maka njem na-enweghị ntụpọ na South America site na onye mmekọ Star Alliance Avianca, "ka Mark Galardo, osote onye isi oche nke Network Network na Air Canada kwuru.
“Ruo ọtụtụ afọ ugbu a, Aéroports de Montréal nọ na-achọ imeziwanye ọrụ site na YUL gaa ebe ndị dị na South America. Mgbe a ga-emepe ụgbọ elu na Sao Paolo n'ime izu ole na ole, Air Canada na-agba okpukpu abụọ site na ịgbakwunye njikọ ọhụrụ a na Bogotá, Colombia, "ka Philippe Rainville, Onye isi na Onye isi oche nke Aéroports de Montréal kwuru. “Na mgbakwunye na ịkwalite njem ụgbọ elu maka ndị otu nnukwu obodo Colombia nke Montreal, ọkwa ọkwa a gosipụtara ọrụ YUL ọzọ dị ka ogige maka njem ụgbọ elu mba ụwa. Obi siri anyị ike na njem a ga-ewu ewu na ndị njem. Anyị na-ekelekwa onye anyị na ya na-arụkọ ọrụ na Air Canada bụ onye na-agbasi mbọ ike iji meziwanye ọtụtụ ebe enyere Montreal. ”
“Ihe a bụ ọkwa na-enye obi ụtọ nke ukwuu. Anyị na-atụ anya ijikọ isi obodo anyị na Montreal, onye ndu ụwa zuru oke na nka na okike dijitalụ, nke ga-aga n'ihu n'ihu na-eto eto nke ngalaba ọrụ ihe okike na Colombia. Routezọ ohuru a ga - emekwa ka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị Canada nwee ike ịnweta Colombia narị afọ nke 21; Obodo mara mma nke puru iche maka ohere ya n'ime ihe ohuru na oru itumgbere ahia ya, na onyinye ya nke na-enweghị atụ nke njem nlegharị anya, "Federico Hoyos, onye nnọchi anya gọọmentị Colombia na Canada kwuru.
“Ozi kachasị mma maka Montreal, ike akụ na ụba ya na mmetụta mba ụwa. Nkwupụta nke ọrụ a kwa afọ n'etiti obodo anyị na Bogotá ga-adị mma maka Montrealers na anyị nwere obi ụtọ, "ka Robert Beaudry, isi nke mmepe akụ na ụba, azụmahịa na ụlọ na kọmitii Executive nke City nke Montreal kwuru.
“Flightgbọ elu ọhụrụ a na-eme ka ọnọdụ Montreal sikwuo ike dịka oghere, na imeghe na nnweta mba ọzọ. Nke a bụ akụkọ magburu onwe ya maka ịzụlite ahịa South America, nke toro karịa 50% na afọ ndị na-adịbeghị anya. Tourisme Montréal na-ekele mbọ nke Air Canada. Airzọ njikọ ụgbọ elu ọhụrụ a ga-abụrịrị njem nlegharị anya na ọganiihu akụ na ụba maka Montreal, na-ekwenye ọnọdụ ya dị ka ụzọ mbata na Canada, "Yves Lalumière, Onye isi ala na onye isi nke Tourisme Montréal kwuru.
Ofbọchị nke Izu
Bogotá 04:15 + 1 ụbọchị
Tuzdee, Tọzdee, Satọde
Wenezdee, Fraịdee, ụbọchị ụka
Oge eme njem na-ebuli njikọta na site na netwọkụ buru ibu nke Air Canada na ogige ya dị na Montreal. Tụkwasị na nke ahụ, ụgbọ elu na-agbakọ oge iji jikọọ na netwọkụ nke Star Alliance ibe Avianca na ebe ndị ọzọ gụnyere Medellin, Cartagena, Cali, Lima, Cuzco, Guayaquil na Quito.
Oktoberfest kasị ukwuu n'ụwa: ụgbọ elu Lufthansa na-egosipụta ndị ọrụ 'Trachten' kachasị ukwuu n'oge niile
Onye isi ụlọ ọrụ Royal Caribbean ga-eweta na nnọkọ elekere njem nlegharị anya nke CTO nke Caribbean
Obodo dị ka ihe mkpali maka akụkụ mgbanwe nke IMEX BuzzHub ọhụrụ
Mwepụta ọgwụ mgbochi ụwa niile na-akpali nlọghachi nke njem
Kedu ihe kpatara na ịchọkwaghị mkpa I-94 iji gaa US
Heathrow: Mgbasa ndepụta nke mba ndị a na-atụ anya imeghe maka oge okpomọkụ chọrọ
TLV ọdụ ụgbọ elu mechiri: Palestine ọgụ rọketi vs Israel site bọmbụ?